काठमाण्डौ । सिभिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बाट गोविन्द गुरुङको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। गुरुङको राजीनामा सञ्चालक समितिको हिजो आइतबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको छ। गुरुङको राजीनामा यही वैशाख १८ गतेबाट लागू हुनेछ। सोही बैठकले बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिलकुमार पोखरेललाई कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी...
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुले चैत महिनाको अन्तिम ४ दिनमै ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले चैत २८ गतेदेखि चैत ३१ गतेसम्म ३१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका हुन्। योसँगै बैंकहरुको कुल निक्षेप ३९ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत चैत २७...
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको तथ्यांकअनुसार फागुन महिनाको वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ६.८४ प्रतिशतमा सीमित बनेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार दर ९.४५ प्रतिशत रहेको थियो। यो हिसाबले गत वर्षको तुलनामा औसत आधार दर २.६१...
चैतमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन रु. ८७ अर्ब, कर्जा लगानी कति ?
काठमाण्डौ । चैतको अन्तिम सातामा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चैतको अन्तिम साता बैंकहरुबाट ३४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। जुन गत साताको तुलनामा ५ अर्बले कम हो। गत साता वाणिज्य बैंकहरुले ३९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए। यो चैत...
हिमालयन बैंकबाट पाटन दरबार क्षेत्रको मन्दिर पुनःस्थापना गर्न रु. १ करोड सहयोग प्रदान
काठमाण्डौ । हिमालयन बैंक लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पाटन दरवार क्षेत्रमा भएको पुरातात्विक महत्वको मन्दिर पुनर्निर्माणको लागि काठमाडौं भ्याली प्रिजर्भेसन ट्रष्टलाई रु. १ करोड प्रदान गरेको छ । बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष तुलसी प्रसाद गौतमले ट्रष्टका कन्ट्री प्रोग्राम डाइरेक्टर रोहित कुमार �...
एनएमबिका ग्राहकहरुलाई द होराइजन होटल र आगन्तुक रिसोर्टमा सहुलियत
काठमाण्डौ । एनएमबि बैँकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरुलाई द होराइजन होटल र आगन्तुक रिसोर्ट, बनेपामा विशेष छुटको ब्यबस्था सहित समझदारी भएको छ । एनएमबि बैँकको द होराइजन होटल र आगन्तुक रिसोर्टबीच भएको छुट्टाछुट्टै समझदारी अनुसार खाना, पेय पदार्थ, आवास, स्विमिङ्ग, स्पा सुबिधाहरुमा १५ ∞ छुटको व्यवस्था गरिएको छ भने स्विमिङ्ग, हेल्थ क्लब र बर्थ डे...
सिभिल बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टर करदाता सेवा कार्यालय विराटचोकमा
काठमाण्डौ । समृद्धिका लागिसिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडि बढिरहेको सिभिल बैंकले मोरङ जिल्ला, सुन्दरहरैचानगरपालिका वडा नं ९, करदाता सेवाकार्यालय, विराटचोकमानयॉ एक्सटेन्सन काउन्टर संचालनमा ल्याएको छ । उक्त एक्सटेन्सन काउन्टरको समुद्घघाटन आन्तरिक राजश्वकार्यालय बिराटनगरका प्रमुख बिमल सापकोटाले गरे । उक्त एक्सटेन्सन काउन्टरको...
काठमाण्डौ । बैंक अफ काठमाण्डौ लिमिटेडले विशेष साधारणसभा डोकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको हिजो आइतबार बसेको बैठकले आउँदो चैत ३ गते विशेष साधारणसभा डाकेको हो। सभा काठमाण्डौको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भर्चुअल माध्यमबाट बिहान १० बजदेखि सुरु हुनछ। सभाले सर्वसाधारण समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना...
काठमाण्डौ । नेपाल बैंक लिमिटेडको अध्यक्षमा नियुक्त मधुकुमार मरासिनीले मंगलबार पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीबाट नेपाल बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष मरासिनीले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका हुन्। मरासिनी अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट सञ्चालकमा नियुक्त भएका हुन्। उनलाई गत फागुन १०...
फागुनको पहिलो साता वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी रु. १८ अर्बले बढ्यो, निक्षेप कति ?
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानीमा केही संकुचन देखिए पनि निक्षेप संकलनमा आक्रमक देखिएका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकअनुसार माघको अन्तिम साता आक्रामक देखिएको वाणिज्य बैंकहरुको ऋण लगानी फागुनको पहिलो साता भने केही घटेको छ। फागुन ७ गतेसम्म बैंकले १८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी बढाएका छन्। योसँगै...
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडको आज आइतबार सम्पन्न १० औँ वार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएका कुल ८.४२ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गरेको छ। भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न सभाबाट सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेबमोजिम बैंकको चुक्ता पुँजीको ८ प्रतिशतका दरले हुन आउने ६४ करोड २ लाख ७१ हजार १७३.९१ रुपैयाँबराबरको बोनस सेयर र कर...
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरु कर्जा प्रवाहमा आक्रामक देखिएका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) का अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले माघ महिनामा मात्रै ७३ अर्ब रुपैयाँले कर्जा प्रवाह गरेका छन्। योसँगै बैंकहरुको कुल कर्जा प्रवाह ३३ खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ। गत पुसमा बैंकहरुको कुल कर्जा प्रवाह ३२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। पुसमा मात्रै...
काठमाण्डौ । सिभिल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज बिहीबार अन्तिम रहेको छ। बैंकले लाभांश र वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनका लागि भोलि शुक्रबार बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको अर्थ आजसम्म कायम सेयरधनीहरुमात्र यो बैंकको लाभांश पाउन र सभामा भाग लिन योग्य हुनेछन्। बैंकले गत आर्थिक वर्षको...